छालामा साना साना डल्ला निस्किए ? यो उपाय अपनाएर एक हप्ता मै सफा गर्नुहोस् - Nepali in Australia
December 28, 2020 EditorLeaveaComment on छालामा साना साना डल्ला निस्किए ? यो उपाय अपनाएर एक हप्ता मै सफा गर्नुहोस्
काठमाडौँ । समान्यतया शरीरका विभिन्न भागमा स–साना डल्ला निस्कने समस्या धेरै मानिसको हुनसक्छ । कसैको शरीरमा थोरै निस्कन्छ त कसैकोमा धेरै ।यी डल्ला हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् तर यिनले खासै हानी गर्दैनन् ।
सौन्दर्यलाई भने यिनीहरूले बिगार्छन् । केही उपाय अपनाएमा भने यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ ।चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो)ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ ।
यसका लागि तपाईंले कपास चुक अमिलोमा डुबाउनुस् । त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दिनको दुईतीनचोटि घोट्नुस् । यो प्रक्रिया दैनिक अपनाउनु भयो भने डल्लाको रंग परिवर्तन हुन्छ र आफैं झरेर जान्छ ।
यसो हुन लगभग एक हप्ता लाग्छ वा सो भन्दा केही बढी पनि लाग्न सक्छ ।मान्छेमा छालाका डल्ला पलाउनु सामान्य कुरा हो । यी डल्ला घातक हुन्नन् । छालाबाट झुण्डिएका साना र नरम बेलूनजस्ता देखिन्छन् ।
चीनबाट काठमाडौं आइपुग्यो १० लाख डोज खोप